Mahatakatra ireo toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainana (2)
"Mijanòna kely ianao hilazako ny tenin'Andriamanitra." 1 Samoela 9:27
"Tandremo mba tsy holavinareo Izay miteny... Ilay avy any an-danitra." Hebreo 12:25
Handeha hanatanteraka asa i Théophile sy Arnaud ary Claude. Teny an-dalana ho any an-tseranam-piaramanidina anefa, dia nisy fahasimbana ny fiara nitondra azy ireo. Tara minitra vitsy izy ireo, ka tsy nahatratra ny fiaramanidina. Fivoriana manan-danja no tsy tratrany... Nanaiky ny zava-nitranga i Théophile, sorena fatratra i Arnaud, tezitra mafy i Claude. Ny ampitso dia tankina izy ireo nahare fa nianjera ilay fiaramanidina. Tsy nisy olona velona na iray aza! Kely foana dia ... maty izy ireo!
- Kristiana i Théophile, raim-pianakaviana. Omaly izy dia nanaiky tam-pahatoniana ny zava-nitranga, na dia tsy takany aza ny antony. Natoky izy, fantany fa manana ny antony anaovany izany Andriamanitra... Anio dia tsapany fa niaro azy tamina fomba mahatalanjona Andriamanitra. Mihetsi-po izy nitantara tamin'ny ankohonany ny fomba nitsimbinan'Andriamanitra azy telo lahy, dia niara-nisaotra an'Andriamanitra izy mianakavy. Narovan'Andriamanitra ny ain'ity zanany.
- Arnaud kosa dia tsy mino an'Andriamanitra, saingy nitarika azy hieritreritra ilay loza nitranga: Aiza no ho nisy azy ankehitriny, raha tsy simba ny fiarakodia? Tsapany tampoka fa voaro tamina fomba mahagaga ny ainy, ka dia nitodika tamin'Andriamanitra izy, Ilay Andriamanitra Izay nitady azy hatry ny ela. Niteny tamin'ny fomba mahery tamin'i Arnaud Andriamanitra, dia nohenoiny.
- Claude koa dia tsy mino, tahaka an'i Arnaud. Tezitra mafy izy omaly. Androany kosa izy miarahaba tena noho izao kisendrasendra tsara izao, ary nihambo teo anatrehan'ny fianakaviany fa tena nanam-bintana. Niteny tamin'ny fomba mahery tamin'i Claude Andriamanitra, saingy tsy nohenoiny.
Raha ety; ivelany, dia tsy misy mampiavaka ireo telo lahy mpiara-miasa ireo. Nefa ho an'ny tsirairay, dia samy hafa tanteraka ny dikan'ilay zava-nitranga. Tsy mitovy ny tanjona nokendren'Andriamanitra, tsy mitovy koa ny vokatra teo amin'izy ireo.